यस्तो पो रहेछ कुलमानलाई प्रचण्डले औधी माया गर्नुको रहस्य ! – Media News Khabar
काठमान्डौ // कुलमानलाई प्रचण्डले औधी माया गर्नुको रहस्य बाहिरियो ! नेपाल विद्युत प्रँधिकरणका प्रमुख कुुलमान घिसिङ र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्धबारे खास खुलासा भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुलमानप्रति धेरै नै सहानुभुति देखाउनुको रहस्य खुलेको हो ।
२०७५ सालको सुरुमै केही समयका लागि भनेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत उक्त गाडी शाहीलाई दिइएको थियो । त्यसपछि, पटक–पटक फिर्ता गर्न अनुरोध गरे पनि मुख्य मन्त्री शाहीले अटेर गर्दै आएको प्राधिकरण प्रशासन निर्देशनालयका एक अधिकारीले बताए । ‘हामीले तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनमार्फत पनि धेरै पटक अनुरोध गर्यौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘उहाँले ‘मलाई भन्न गाह्रो हुने भयो, बरु अर्थ मन्त्रालयबाट गाडीको मूल्यबराबरको रकम उपलब्ध गराउँछु’ भन्नुभयो ।’
Previous भिरैभिरको बाटो देखेर अत्तालिएका प्रचण्ड यस्तो छिद्र प्रयोग गरेर भविष्य चम्काउने रणनीतिमा !
Next पूर्व माओवादी नेता प्रभु साहले नै सभामुखलाई अपराधी बनेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग !